Fivarotana voa mafy any amin'ny Plateaus Ordu | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra mainty hoditraTafika 52S Festival Festival izay natao tao amin'ny Ort Plateaus
06 / 01 / 2020 Tafika 52, ANKAPOBENY, Faritra mainty hoditra, TORKIA, TELPHER
nandry ny tafika tao amin'ny kijana nalamina
Ordu Metropolitan Municipal mba hanatsarana ny fanatanjahantena ririnina sy ny ririnina any amin'ny faritanin'i Ordu dia nikarakara festival sled tamin'ny lalana 3 misaraka.
Ny fetin'ny sled nokarakarain'ny Kaominin'i Metropolitan ary natao voalohany tany Ordu; Plateau Aybasti Alakamisy, Mesudiye Keyfalan Plateau ary Akkus Argan Plateau no natao. Nandritra ny fetibe izay nalamina tamin'ny lalana 3 samy hafa, izay avy amin'ny 7 ka hatramin'ny 70 izay tonga tany amin'ny sehatry ny arabe miaraka amin'ny serivisy sy ny fanohanana sy ny fanohanana an'i Ordu Metropolitan Munisipaly dia nankafy ny ranomandry. Ben'ny tanànan'i Ordu Metropolitan Mehmet Hilmi Guler, dia nanatrika ny fetibe izay natao tao amin'ny Plateau Alakamisy Aybasti. Ny hazakazaka, hazandrano mikoriana lakana, lakolam-panala sy tobogganing dia natao tao amin'ny Aybastı Plateau, izay malaza amin'ireo mpanamory azy. Taorian'izay, ny dite sy ny barbecue dia natolotra tamin'ny afo.
"NY TENY REHETRA HITANAO AMIN'ILAY TONTOLO IZAO TONTOLO IZAO"
Aorian'izay dia ho hafa tanteraka ny Aybastı izay nambaran'ny Ben'ny Tanànan'i Ordu. Hoy i Mehmet Hilmi Güler, uz Te hanao an'i Perşembe Highland ho ivon-toerana mahasarika amin'ny ririnina isika. Amin'izany fomba izany, dia nanao dingana tena lehibe izahay. Aorian'izany dia tsy misy hatsiaka ary tsy mihemotra. Hisy ny mpitaingina skoto sy kayak izay mifaninana ao anaty rano. Ho hitan'ny rehetra io toerana io, izay mahagaga izao tontolo izao. Hanangana bungalow izahay eto. Aorian'izay dia ho hafa tanteraka i Aybastı. Nahita ny hatsaran'ity toerana ity ara-potoana ny razantsika. Ankehitriny izahay dia handresy ny fonao amin'ny alàlan'ny fanaovana ity tsara tarehy ity. Izany koa ny fon'ny munisipaly. Ny asantsika rehetra dia ny hahafaly anao sy mampihomehy anao. Arakaraka ny maha afa-po anao, dia mahazo voky kokoa isika. Ny hany zavatra andrasanay aminao dia ny miantoka ny fivoaran'ny Aybastı miaraka amin'ny fampitomboana ny biby fiompinao. Aybastılı ny mpanao raharaham-barotra mahomby indrindra ny Torkia. Tokony averinay eto ireo mpandraharaha ireo eto. Tsy hisy olona hihira ny hiran'ny olona intsony. ”
UZ ISIKA NITIAVANA ISIKA TENAN'ANDRIAMANITRA FAHAFATESANA INDRINDRA
Nilaza izy ireo fa nanao izay rehetra azony atao mba hanoratana ny Tafika. Hoy i Şenel Yediyıldız, "Tonga eo amin'ny vavahady Tokat, Amasya ary Sivas izahay androany. Eto isika miaraka amin'ireo avy any amin'ireo tanàna mifanila. Androany dia nahita ny hakanton'ny tanànantsika sy ny takelaka isika. Manana ny andro tsara indrindra amin'ny ririnina izahay. Raha mbola manome firaisana sy firaisankina ao an-tanàna isika dia manana izany. Izahay dia manao izay rehetra azonay atao atao mba tsara tarehy io toerana io. Miaraka amin'ny fanombohana sarobidy sy fandraisana anjaran'ny Ben'ny tanànanay Metropolitan dia nantsoinay hoe Bolaman Basin ity faribolana ity ary nanomboka tetikasa iray. Amin'ity tetik'asa ity dia ho lasa velona kokoa ireo tany ireo. ”
"NY PRESIDENTE AN-TENY NANAMPIANA NY FAHAZAVANA ANTSIKA MAMPIKA AN'ILAY TENY FOLO 3 ARY HOLO TOLO
Aybastı sy Perşembe Plateau dia tokony ho hitan'ny rehetra manamarina ny ben'ny tanàna Aybastı Beytullah Gençtan, “Ny ben'ny tanànanay Metropolitan tsy afaka 3 volana, 12 volana dia nanome fanazavana anay ny tafika. Alakamisy Plateau, Aybastı'm tena tsara tarehy. Fantatray fa tsara tarehy izy io tamin'ny ririnina, nefa tsy maintsy fantany izy fa afaka mahita ireo hatsarana ao amin'ny fireneny. Ity ririnina ity, be dia be ny olona tonga tany amin'ny lemaka ho voly. Ankehitriny isika dia manana ben'ny tanàna avy amin'ireo tanàna hafa avy amin'ny distrika mifanila. Androany isika rehetra dia hiara-hiaraka. ”
"NY TENY DIA AN-TOKONY DIA ATAO ANAO"
Ny Ben'ny tanànan'ny Mesudiye Isa Gul dia nilaza fa fanombohana ny fetibe ary hoy izy, fetin'ny fetibe izay natolotray teto androany no nanombohantsika. Isaorako ny Ben'ny tanànanay Metropolitan raha manohana anay amin'ity raharaha ity. Mino izahay fa ny Plateau Mesudiye dia ho iray amin'ny toerana isa ao Ordu toa an'i Ulugöl tahaka ny Çambaşı Plateau. Yer
“TAMIN'NY ARGAN IZAY AZO ATAO TANY AN-TOKONY EO GÖ
Nandritra ny ambaratongan'ny fandaharana, hoy ny Ben'ny tanànan'ny Akkus Isa Demirci, dia ny Ar Ar Plateau dia iray amin'ireo toerana manan-danja amin'ny fanokafana ny tafika ho amin'ny fizahan-tany mandritra ny 12 volana. Ity dia ho iray amin'ny toerana mahafinaritra amin'ny ho avy. Nanomana ny foto-drafitrasa izahay ho an'ny fizahan-tany fahavaratra sy ny ririnina. Tiako ny nisaotra ny Ben'ny Tanànan'i Metropolitan izay nandray anjara tamin'ity fikambanana ity. ”
“NANOTRA NY ABDOMA izahay”
Olom-pirenena nandray anjara tamin'ilay fandaharana hoe: "fikambanana tsara tokoa ho anay izany. Nahafinaritra anay tanteraka ny oram-panala. Nangoninay tsara ny fahatsiarovana eto. Ben'ny tanànan'ny Distrika Ordu Metropolitan, izay nandray anjara tamin'ireo hetsika ireo. Misaotra an'i Mehmet Hilmi Güler ”.
Sledge Fahafinaretana ao amin'ny Tany Ordu
Ny fifaninanana karakaraky ny karatra dia hatao any Uludağ Winter Festival
Fetiben'ny Toboggan Beypazarı
Ordu Coast ho Plateau Cable Car
Helikoptera sy Cable Car ho any amin'ny Highlands any Ordu
Fiarandalamby mainty hoditra ho an'ny fiara fitaterana
Tetikasan'ny tetikasa ravintsara dia manamafy orina ny fizahan-tany ara-toekarena
Rivotra vita amin'ny fiantsonan'ny seranam-piaramanidina no namboarina tao Trabzon
Fetiben'ny Ski Festival
AnadoluJet dia mihaona amin'ireo ankizy madinika ao amin'ny Fetiben'ny Ankizy Kocaeli
Aybastı Alakamisy Plateau
sledding tia manao ski ambony
lakana hanao kayak
Toboggan Fetibe any Ordu Highlands
Fanavakavahana tsara momba ny vehivavy amin'ny fitaterana any Muğla